Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Oo Bushaaro Farxadle U Diray Bulshada+Digniin Culus Oo Uu U Diray Ganacsatada – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Maalmihii la soo dhaafay waxa suuqyada dalka laga dareemayey cidhiidhi dhanka wax kala iibsiga ah, waxaana dadweynuhu ay kuyuu ugu jireen Bakhaarrada cuntada laga iibsado, iyagoo doonaya inay iibsadaan Raashin kayd u noqda.
Gudoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Md. Jamaal Caydiid Ibraahin, ayaa u bushaaro farxad leh la wadaagay, Shacabka Somaliland oo ka wer-wersanaa in raashin yaraani dalka ka dhacdo, maaddaama oo Cudurka Coronavirus uu dunida kala Takooray.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Somaliland Md.Jamaal Caydiid Ibraahim oo maanta Saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa, ayaa sheegay in Raashin iyo Daawooyin dadka iyo dalka ku filani ay dalka yaallaan, sidaasi darteed ay Shacabku wer-werka daayaan.
Guddoomiye Jamaal oo ay hareero fadhiyaan qaar ka mid ah Ganacsatada waaweyn ee Somaliland ayaa isagoo Arrimahaa ka hadlaya yidhi “Ganacsatada Raashinka soo dajisaa waxay ballan-qaadeen in wax Raashin ah oo Waddanka ka go’ayaa aanu jirin oo uu inoo buuxo oo uu kayd inoo yahay, waxa kale oo ay ogyihiin inuu soo socdo (Raashin kale), oo kii hore oo aan dhammaan uu ka kalena imanayo, markaa ma jirto wax raashin ah oo laga werwerayo inuu Dalka ka go’o.”
Gudoomiye Jamaal Caydiid Ibraahim ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi, “Dawooyinkiina way inoo buuxaan, wixii hore ee inoo yaalayna way inoo yaallaan, waxan inagu soo kordhay ee Coronavirus khuseeya ee ay ka mid yihiin nadiifiyaasha Gacmaha iyo Waxyaabaha Afka lagu xidho ee Mask loo yaqaano way inoo taallaa, inta soo socota ee inoo imanaysana Xukuumadda uu Madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi-na wuxuu ballan-qaaday in cashuur dhaaf Dalka lagu soo geliyo, wixii hore ee inoo yaalayna aanay Dalka ka bixin.” ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo digniin u diray Ganacsatada Raashinka ku iibiya Tafaariiqda “Raashinka, Ganacstada Qiimihii raashinka ku kordhisa qiimo kale waa dambiileyaal, waxaanuna faraynaa inay ummaddooda u tudhaan, laakiin Xukuumaddu Dadweynaha ku odhan mayso kuyuu ha gelina oo waxba ha iibsanina.”
Rugta Ganacsiga Somaliland
Madaxweyne Trump oo u Bixiyey Coronovirus, Fayruska Shiinaha